सलमानले करियर बर्बाद गरेका विवेक बने अरबौँका मालिक…. – Khabaarpati
सलमानले करियर बर्बाद गरेका विवेक बने अरबौँका मालिक….
December 25, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सलमानले करियर बर्बाद गरेका विवेक बने अरबौँका मालिक….
बलिउडका भाइजान सलमान खान र वि’वाद सधैं एक अर्काको साथमा रहन्छन्। ती विवादहरू कहिले सलमानका प्रेमिकाहरूका लागि भैदिन्छन् त कहिले कसैसँग झ’गडाको निहुँमा हुने गर्दछन्। प्रायः सलमानका झ’गडाहरू सुन्नमा आइरहन्छन्। सलमानका सबैभन्दा चर्चित झ’गडामध्यको यस्तै एउटा झ’गडा अभिनेता विवेक ओब्रोयसँगको हो। नायिका ऐश्वर्या रायलाई लिएर भएको सलमान र विवेकको झ’गडाले विवेकको फिल्मी करियर नै ध्व’स्त पारिदियो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ऐश्वर्या राय सलमान खानसँग टाढिएर विवेकसँग नजिकिएको सलमानलाई पटक्कै मन परेको थिएन। उनले पटकपटक विवेकलाई ऐश्वर्यासँग टाढिन ध’म्की पनि दिएका थिए। तर ऐश्वर्या र वि’वेक झन् नजिक भए। यो देखेर सलमानले विवेकलाई मा’र्ने ध’म्की दिए।त्यसैबेला विवेकले प्रेस कन्फ्रेन्स राखेर सलमानले आफूमाथि गरेको व्य’वहार सबैलाई बताए। यतिबेला वि’वेक सफलताको शिखरमा थिए। र यही प्रेस कन्फ्रेन्स विवेकको जिन्दगीको का’लो दिन बन्यो। सलमानका वि’रुद्ध आवाज उठाएकाले सलमानले विवेकको हातमा कुनै फिल्म, अ’वार्ड पर्न दिएनन्। विवेकले सार्वजनिक रूपमै मा’फी माग्दा पनि सलमानले कुनै वा’स्ता गरेनन् र बिस्तारै विवेकको फिल्मी करियर सकियो।
फिल्मी करियर सकिए पनि विवेक अहिले अ’र्बौंका मालिक छन्। विवेकको आफ्नै प्रो’डक्सन हाउस ओब्रोय मेघा इन्टरटेन्मेन्ट छ। विवेक कैयौं कम्पनीका मालिक पनि हुन्। स्रोतअनुसार विवेकको कुल सम्पत्ति १५ मिलियन डलर यानेकी १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी छ। विवेक समाजसेवा पनि गर्दछन्। सुनामीपी’डित, क्यान्सरपी’डित, मानसिक सन्तुलन गु’माएका थुप्रैलाई सहयोग गर्नुका साथै विवेक जनावरको निम्ति काम गर्ने संस्थासँग पनि जोडिएका छन्।विवेकले बलिउडमा सफलता हाँसिल गर्न नसके पनि समाजसेवामा उनी निकै रमाइरहेका छन्। यो कार्यका लागि विवेकको तारिफ गर्नैपर्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चर्चामा आलिया भट्टको गुलाबी स्वेटर, मूल्य सुनेर सबै चकित….
December 9, 2020 Khabar Pati